Inona avy ireo fahafahana tonga lafatra mba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao?
Rehefa miova mandritra ny fotoana ny algorithome amin'ny alàlan'ny fikarohana, dia miteraka fanovana ihany koa ny fomba amboamboarina amin'ny pejy. Ny fikarohana fikarohana dia ho sarotra kokoa amin'ny ho avy noho ny fitomboan'ny fifaninanana amin'ny sehatry ny varotra dizitaly. Miaraka amin'ny fanovàna algorithms amin'ny fikarohana, ny fitondrantenan'ny mpampiasa fikarohana dia miova ihany koa, ka mahatonga ny sehatra dizitaly hivoatra kokoa, indrindra raha mikasika ny famoronana rohy. Ny rehetra webmasters dia mahatakatra ny sandan'ny valiny ho an'ny loharano rehetra ary mametraka ny ezaka ataony amin'ny fahazoana azy ireo. Na dia mahazo rohy ekena avo lenta amin'ny tranonkala aza ianao, dia mila miezaka ny manatsara ny fahitana ianao. Mora kokoa ny asa noho ny vita. Anatin'ity lahatsoratra ity, dia hifanakalo hevitra momba ny teknikam-pampandrosoana sasantsasany isika momba ny fomba hahazoana ny rindran-tsavily tsara avy amin'ny tranokalan'ny PR ary hanatsara ny laharana eo amin'ny pejy valin'ny fikarohana.
Ahoana ny fomba hiverenana toeram-pivarotana amin'ny tranokalanao?
Jereo ny fanamarihanao ny marika
Io dia iray amin'ireo fomba tena ilaina sy mora indrindra amin'ny fananganana rohy izay azonao ampiasaina rehefa manana ny lazanao be loatra ao anatin'ny orinasa na ny vao haingana ianao nitarika fanakanana. Ity rindrambaiko tsotra mifototra amin'ny rohy ity dia manampy anao hahazo ny kalitao be dia be, ary ny rohy ekena misy ifandraisany amin'ny tranokalanao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hamantatra ireo fanamarihana tsy hay lazaina ny marikao ary angataho ny mpanoratra amin'ireto teny ireto mba hametrahana rohy mankany amin'ny tranonkalanao. Azonao atao ny manatsotra ny fomba fitadiavana ny fanamarihana ny marika ampiasainao amin'ireo fitaovana matihanina toy ny Semalt Website Analyzer, Google Search, Google Alerts, sns.Raha te-hamantatra isaky ny manonona anarana ny marika, dia mila mametraka mailaka na fampahafantarana amin'ny tranokala ianao.
Manomeza fampahalalana momba ny raharaham-barotra amin'ny fifanakalozana rohy
Fomba iray hafa mahasoa ny fomba ahafahanao manatsara ny fahitana ny marikao ary manangana ny laharana ao amin'ny Google SERP dia amin'ny fanomezana ny testimonials Ho an'ireo tranonkala hafa ho takalon'ny rohy amin'ny tranokalanao. Ity rafitra fananganana rohy ity dia hanampy anao hametraka rohy ivelany ho an'ny orinasa malaza ary hametraka ny marika eo amin'ny pejy an-tranonkalany na ny tsipiriany. Ny fametrahana fijoroana vavolombelona amin'ny vohikala izay napetraka ao amin'ny tsenan-tsenanao dia mety hitondra fifandraisana amin'ny tranokalanao.
Asehoy amin'ny rohy mifandraika
Ny raozy isany dia ny votoaty sarobidy indrindra novolavolain'ny mpitoraka blaogy sy ny mpitory indostrialy izay mametraka ny bokiny ara-potoana. Ireo mpamaham-bolongana mpanamboatra rohy dia mikaroka hatrany ny votoaty tsara sy manampy amin'ny lisitra. Tena olana tokoa ny famoronana rohim-pifandraisana ao amin'ny tsenan-tsenanao satria mila tsy mitsahatra mitady votoaty sarobidy ao amin'ny tranonkala. Ankoatr'izany, mety mety tsy ho tafaverina ny mpitsidika rohy. Na izany aza, raha afaka manome azy ireo amin'ny votoaty manaitaitra sy manan-danja ianao, dia mihamitombo ny fahatakaran'izy ireo. Ny fifandraisana amin'ny mpandrindra fifandraisana dia miasa toy ny fampielezan-kevitra hafa. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitady ny fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny mpanome rohy ary mandefa azy ireo mailaka manokana miaraka amin'ny soso-kevitra.
Manangana rohy mankany amin'ny YouTube
YouTube dia sehatra fampitam-baovao tonga lafatra amin'ny famokarana fifamoivoizana amin'ny tranokalanao. Ny niches manokana sasany ihany no afaka mampiasa io fomba fananganana rohy io. Ireo niches dia ahitana teknolojia, kilalao, fanabeazana, siansa ary fialamboly. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fananganana rohy eto amin'ity sehatra ity dia maniry ny hahazo mpividy ny mpamaham-bolongana amin'ny sehatry ny pejy ny mpitoraka blaogy. Azonao atao ny manangana fifandraisana eo amin'ny mpivady video miaraka amin'ny mpamaham-bolongana amin'ny alàlan'ny YouTube. Ohatra, azonao atao ny mampifandray ireo horonan-tsary ao amin'ny blôginao, ary amin'ny fifanakalozana, hampiditra ny lahatsariny ao amin'ny lahatsoratra bilaogy ianao Source .